Nagu saabsan: APLUS Global Ecommerce
Koox xirfadlayaal xamaasad leh oo leh xirfado suuqa u qalma ayaa ka dhigaya wadnaha iyo nafta Aplus Global Ecommerce. Waxaan aaminsanahay in la abuuro jawi ganacsi e-ganacsi oo kobcaya, maalin-shaqo, iyo maalin-bax si loo siiyo macaamiisha adeegyada ugu fiican. Waxaan bixinaynaa Adeegyada ugu Fiican Amazon Suuq-geynta Adeegyada.
Shirkad saadaalinaysa jawi ganacsi oo caafimaad qaba, suuqyo tartan leh, iyo adduunyo barwaaqo soo kordhay, A Plus Global e-commerce waa mid ka mid ah meelaha noocan oo kale ah ee ganacsiyada khadka tooska ah looga caawiyo inay si habsami leh u socdaan. Waxaan siinaa adeegyo 360 ° shirkadaha elektaroonigga ah. Laga bilaabo caawinta ganacsiyada elektaroonigga ah waxay leeyihiin koontada iibiyaha caafimaadka leh illaa helitaanka amazon iibiyeyaasha koontada dib u soo celinta, waxaan leenahay xalal dhammaantood. Ujeedadu waa in aan kaliya laga caawin ganacsiyada inay ku kobcaan suuqyada sida Amazon laakiin sidoo kale inay abuuraan nookooda adduunka ee ganacsiga e-commerce. Waxaan isku dayeynaa inaan ganacsiyada kala mid dhigno waddooyinka sida dhaqsaha leh u ballaaranaya ee adduunka e-commerce oo aan inbadan iyo in ka badan baareyno. Adeegyadeennu waa kuwa ugu fiican suuqa ka dhigaya A Plus Global shirkad lagu kalsoon yahay. Waxaan haynaa koox shaqsiyaad gacanta lagu xushay oo ka kala yimid meelo kala geddisan oo leh xirfado farsamo oo si aad ah suuqa looga doonayo. Daacadnimadooda iyo u heellan waxay ku darayaan qiime badan adeegyada, taasina waa USP of A Plus Global e-Commerce. Adeegyadeenna 24-ka saacadood ee dammaanad-qaadka ah ee dib-u-soo-celinta xisaabaadka Iibiyaha ee Amazon ayaa si fiican loo yaqaan. Adeegyada hubinta ee iibka iyo koontada ayaa sidoo kale mudan in la isku dayo. Daboolida adeegyo aad u tiro badan, waxaan kula shaqeyneynaa afar arrimood oo waaweyn:
Adeegga Rafcaanka Amazon - waxaan kaa caawinaynaa inaad mar labaad iibiso 24 saac gudahood
Caafimaadka koontada iibiyaha - waxaan ku xafideynaa koontadaada koontada khibradeena
Taageerada ganacsiga iyo iibka - waxaan kaa caawinaa inaad korto, ma aha oo kaliya inaad sii wadato
Website-ka iyo horumarinta App- waxaan ku siineynaa barxad kuu gaar ah oo aad ku shaqeyso
Waxaan bixinnaa adeegyo iyo xirmooyin la habeeyay oo ugu habboon baahidaada, oo lagu dhex daray siyaasadaha gobolka. U adeegida saldhig macaamiil oo ku baahsan adduunka oo dhan, A Plus Global wuxuu bixiyaa adeegyada aadka loogu baahan yahay sida "Amazon Sellers Account Reinstatement" oo looga baahan yahay koontadaada iibiyaha iyada oo loo marayo dadaalka, khibradda, iyo aqoonta kooxdeena.